स्वास्थ्य पेजबाँकेमा कति छन् लक्षण चिन्ह देखिएका संक्रमित ? - स्वास्थ्य पेज बाँकेमा कति छन् लक्षण चिन्ह देखिएका संक्रमित ? - स्वास्थ्य पेज
बाँकेमा कति छन् लक्षण चिन्ह देखिएका संक्रमित ?
नेपालगन्ज २७, भदौ ।
बाँकेमा लक्षण चिन्ह देखिएका कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या सयको हाराहारीमा पुगेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोराना फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म उपचारमा रहेका ३ सय ७१ संक्रमित मध्ये ८४ जनामा लक्षण चिन्ह देखिएको हो ।
लक्षण चिन्ह देखिएका ती विरामीको भेरी अस्पताल नेपालगन्ज र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ । भेरी अस्पतालमा ४४ र मेडिकल कलेज कोहलपुरमा ४० जनाको उपचार भइरहेको छ । चिन्ह लक्षण देखिएका संक्रमितमा १३ महिला र ७१ पुरुष रहेका छन् ।
तीमध्ये १० जनाको आइसीयुमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने एकजनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । लक्षण चिन्ह नदेखिएका विरामीहरु भने जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिएका आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् ।
बाँकेमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भएर ९ सय ८५ जना घर फर्किसकेका छन् । त्यसमा २ सय ८ महिला छन् भने ७ सय ७७ पुरुष रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ हजार ३ सय ६४ पुगेको छ । योसंख्या विहीबारसम्मको हो । जिल्लामा चार महिला र चार पुरुषगरी ८ जनाको ज्यान गएको छ ।